हँसिलो मुहार भएको मानिस सबैको प्यारो, फाइदा यस्ता छन् ! - नेपालबहस
| १८:५२:१८ मा प्रकाशित
एजेन्सी । भनिन्छ नि जो धेरै हास्छ उ सधै स्वस्थ्य हुन्छ अथवा हँसमुख अनुहारले अरूको मन सजिलै जित्न सक्छ । त्यसैले, हँसिलो मुहार भएको मानिस सबैको प्यारो हुन्छ ।
प्रायः सफल मानिसका पछाडि हाँस्नु अर्थात् खुसी रहनुले विशेष अर्थ राखेको हुन्छ । अर्थात्, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जो मुस्कुराउन सक्छ, उसैको जीवन सफल हुन्छ । हाँस्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ । हाँसो सर्वसुलभ प्राकृतिक औषधि नै हो ।
अब जान्नुहोस्, हाँस्नुका फाइदा:
‍प्रधानमन्त्री ओली शैली पछ्याउँदै कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही ! ५ दिन पहिले
शिक्षकलाई कोरोना भएपछि चौताराका विद्यालय बन्द ७ दिन पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणबाट १३ जनाको मृत्यु २ हप्ता पहिले
चक्रपथ बाहिरको सडक निर्माण अघि बढ्यो २ हप्ता पहिले
पोखरामा प्रतिरक्षाका लागि प्रहरीले खोल्यो फायर २ वर्ष पहिले
७२ शैयाको कोभीड अस्पताल बनाउन संग्रिला बैंकको सहयोग ७ महिना पहिले
प्रगतिपथमा अघि बढ्दै महालक्ष्मी विकास बैंक १ वर्ष पहिले
भारतम थप ४३ हजारमा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ९३ लाख नाघ्यो ५ महिना पहिले